दायित्व बिमाको अपरिहार्यता कति ? | NewsKarobar
गृहपृष्ठ दायित्व बिमाको अपरिहार्यता कति ?
माघ ७ गते मकवानपुरको दामनमा रहेको एभरेष्ट पानोरमा रिसोर्टमा बसेका आठ भारतीय पर्यटकको हिटरले निसासिएर मृत्यु भयो । एक सातापछि माघ १५ गते राति ललितपुरको नख्खिपोट रोडमा रहेको फिट एन्ड फाइन जिमखानामा साउना लिँदा एक दम्पतीको पनि निसासिएरै ज्यान गयो । पुस १९ गते कसमस कलेजमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्रा १९ वर्षीया जेनेथ चौहानले ललितपुरको सातदोबाटोस्थित सुरिभा गर्ल्स होस्टेलको शौचालयमा निसासिएर मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो ।
यी यस्ता घटना हुन्, जसको क्षतिपुर्ति कहिल्यै हुँदैन । यस्ता कतिपय घटनामा राज्यले आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपरिरहेको हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित व्यवसायीले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोरिरहेका हुन्छन् । तर, दायित्व बिमाका बारेमा न सम्बन्धित व्यवसायी न त सरकारले गम्भीर रूपमा सोचेको पाइन्छ ।
पानोरमा रिसोर्टमा भएको घटनापछि गठित छानबिन समितिको सुझावका आधारमा पर्यटन मन्त्रालयले तीन महिनाका लागि पानोरमालाई निलम्बन गरेको छ । तर, होटललाई दायित्व बिमाबारे कुनै सुझाव दिइएको छैन । पर्यटन विभागका सहसचिव एवं छानबिन समितिका संयोजक सुरेन्द्र थापा होटलले सम्पत्ति बिमा गरेको बताउँछन् । तर दायित्व बिमाका विषयमा उनले अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘त्यतातिर हाम्रो ध्यान गएन,’ उनले भने । जिमखाना र होस्टलको विषयमा सरकारका लागि ठूलो मुद्दा नै बनेन ।
प्रदेश ३ को प्रदेश सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसकी सांसद विजया श्रेष्ठ केसीले भ्रमण वर्षको उत्साहमा रहँदा पहिलो गासमै ढुंगा परेको बताइन् । नेकपाकी प्रदेशसभा सदस्य मुनु सिग्देलले पनि भ्रमण वर्षमै केन्द्रित भएर रिसोर्टको मापदण्डमाथि प्रश्न उठाइन् ।
त्यस्तै सांसद लालकुमारी पुन, रिना गुरुङलगायत पनि भिजिट नेपालको लक्ष्य प्रभावित हुनेमै चिन्तित थिए । त्यति मात्र होइन, होटल संघ नेपाल (हान)ले नै आफ्ना सदस्य होटल तथा रिसोर्टलाई सरकारले तोकेको मापदण्ड अनिवार्य र पूर्णपालना गर्न आग्रह गर्‍यो । तर, दायित्व बिमाबारे मौनता साधेको छ । जबकि, छानबिन समितिमा होटल संघको तर्फबाट पर्यटन व्यवसायी युवराज श्रेष्ठको पनि प्रतिनिधित्व थियो । ‘हाम्रो सुझावका आधारमा सरकारले निर्णय (निलम्बन) लिइसकेको छ,’ उनले भने । मकवानपुरको थाहा नगरपालिका ४ सिमभञ्ज्याङ दामनमा रहेको एभरेष्ट पानोरमा रिसोर्ट हानको सक्रिय सदस्य रिसोर्ट हो ।
के भन्छन् विज्ञ तथा व्यवसायी ?
विज्ञहरू होटल तथा रिसोर्ट, अस्पताल, साउन, होमस्टे, स्विमिङ पुल, लिफ्टलगायतको मापदण्डमा दायित्व बिमा पनि उल्लेख हुनुपर्ने बताउँछन् । बिमा विज्ञ डा. रविन्द्र घिमिरेले पनि सरकारले यस्ता विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘विश्वभर प्रचलनमा रहेको दायित्व बिमालाई सबै क्षेत्रमा सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
निर्जीवन बिमक संघका अध्यक्ष एवं शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष (सिइओ) दीपप्रकाश पाण्डे नीतिगत व्यवस्था भएमात्र दायित्व बिमा अनिवार्य हुने बताउँछन् । यसमा सरकारले सोच्नुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल इन्स्योरेन्सका नायब महाप्रबन्धक विक्रान्त पाण्डे सरकारले दायित्व बिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले दायित्व बिमा जरुरी नै सम्झिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा सरकार, नियमनकारी निकाय, बिमा संघ, बिमा कम्पनीलगायतका सबै सम्बन्धिक निकाय गम्भीर हुनुपर्छ ।’ दायित्व बिमा अनिवार्य गरिएमा करको सबै व्यवसाय करको दायरा पनि आउनले तर्क उनको छ । ‘होटलको भौतिक सम्पत्तिको बिमा प्रचलनमा छ तर ग्राहकप्रतिको उत्तरदायित्व छैन,’ उनले भने, ‘यो गलत भइरहेको छ ।’
एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पवन थापा अचेल केही होटलले दायित्व बिमा गर्न थालेको बताउँछन् । ‘बुझेका केही ठूला होटलले दायित्व बिमा गर्ने गरेका छन्,’ आफू आइएमई जनरल इन्स्योरेन्समा रहँदा शंकर होटलले दायित्व बिमा गरेको दृष्टान्त पेस गर्दै उनले भने, ‘केहीले गर्न थालेका छन् तर यसलाई अनिवार्य बनाए राम्रो हुन्छ ।’
बिमा जानकार रविन्द्र भट्टराई यसमा बिमा समिति र सरकारको मात्रै दोष देख्दैनन् । ‘खेत तयार भइसकेपछि पनि अब धान रोप भन्नुपर्ने यो कस्तो विडम्बना हो ?’ उनले भने, ‘बिमा व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय प्रवर्धनमा आफैं ध्यान दिनुपर्छ ।’ होटल, रिसोर्ट, साउना, अस्पताल, होमस्टेलगायतमा पुगेर दायित्व बिमाबारे जानकारी गराउने हो भने सबैले आफैं बिमा गर्ने उनको तर्क छ । आफ्नो व्यवसाय विस्तारमा लाग्न बिमा व्यवसायीलाई कसैले नरोकेको उनले टिप्पणी गरे । ‘सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्ने कुरा त छँदैछ,’ उनले भने, ‘तर व्यवसायीले पनि आफ्नो बजार आफैं खोज्नुपर्छ ।’
बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको तर्क पनि करिब उस्तै छ । उनी नेपालजस्तो मुलुकमा बिमा अनिवार्य गरिए व्यावसायिक वातावरण नै प्रभावित हुनसक्ने बताउँछन् । ‘बिमा अनिवार्य या बाध्यकारी गर्नु हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘सचेतना अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्छ, आफ्नो क्षति कम हुने बुझेपछि स्वयं बिमा गर्न उद्यत हुन्छन् ।’ यद्यपि, वैदेशिक रोजगार बिमा, स्वास्थ्य बिमा, तेस्रो पक्ष बिमा जस्ता बढी जवाफदेहिता वहन हुने ठाउँमा सरकारले अनिवार्य बिमाको व्यवस्था गरेको उनले बताए ।
होटलको मापदण्डमै परेन
सरकारले गत वर्ष पुसमा सबै होटल, रिसोर्ट तथा लजका लागि नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ । जसमा एकतारे देखि पाँचतारे डिलक्ससम्मका होटल, पर्यटकीय स्तरका लज, रिसोर्ट र बुटिक होटलको मापदण्ड तोकिएको छ । मापदण्डमा दायित्व बिमाबारे उल्लेख छैन ।
होटलका कोठामा आवश्यकताअनुसार विद्युत आपूर्ति एवं वैकल्पिक व्यवस्था भएको हुनुपर्छ । एकतारेदेखि पाँचतारे होटलमा सुत्ने कोठा, सभा हलमा एयर कन्डिसन वा वातावरण अनुकूलनको व्यवस्था र स्वच्छ हावा प्रवाहको व्यवस्था भएको हुनुपर्छ ।
सबै स्तरका होटल तथा हेरिटेज र बुटिक होटलमा अट्याच्ड बाथरुम हुनुपर्छ । देशको प्रचलित स्वास्थ्यसम्बन्धी नियमको पालना भएको प्रमाणपत्र प्राप्त हुनुपर्छ । रिसोर्टहरुमा २४सै घण्टा रुम सर्भिस उपलब्ध हुनुपर्छ ।
सबै प्रकारका होटल, लज तथा रिसोर्टमा आधारभूत औषधी तथा प्राथमिक उपचारको व्यवस्था हुनुपर्छ । खासगरी अत्याधुनिक रिसोर्टहरुले सम्भव भएसम्म रिसोर्टभित्रै २४सै घण्टा चिकित्सकद्वारा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
मापदण्ड आउनुअघि नै खुलेका होटल तथा रिसोर्टले यी मापदण्ड ६ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर होटलहरूले उल्लिखित मापदण्ड नै पनि पूरा गरेका छैनन् ।
कति अपरिहार्य ?
सरकार या नियामकका लागि भन्दा व्यवसायीका लागि दायित्व बिमा अपरिहार्य छ । सानो गल्तीले हुने ठूलो क्षतिबाट बच्न भौतिक सम्पत्ति या ग्राकहको उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने सन्दर्भमा व्यवसायी स्वयं सचेत हुनुको विकल्प छैन । बिमा भनेकै जोखिम हस्तान्तरण हो । अतः व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय प्रवर्धनमा आउनसक्ने सम्भावित जोखिम हस्तान्तरण गरेमात्र लक्ष्यमा पुग्न सहज हुनेछ । बिमा व्यवसायीले पनि आफ्नो व्यवसाय विस्तारका लागि ‘अरुले गरिदेओस्’ भन्ने मानसिकताबाट बाहिर निस्किनुपर्ने बिमाका जानकारहरू बताउँछन् ।
पछिल्लाे - स्वास्थ्य सेवा ऐन बनाउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
अघिल्लाे - शिवमाया तुम्बाहाङ्फे कानुनमन्त्री नियुक्त, आजै सपथ